Ambanja : Taom-piotazana lavanila, hisokatra androany ny any amin’ny faritra Sambirano - ewa.mg
News - Ambanja : Taom-piotazana lavanila, hisokatra androany ny any amin’ny faritra Sambirano
Manoloana ny fitarainan’ireo tantsaha mpamboly any amin’ny Distrikan’ Ambanja amin’ny afitsoky ny mpangalatra, dia namoaka daty ny fanjakana, ka hisokatra androany alatsinainy amin’ny fomba ofisialy ny taom-piotazana sy ny tsenan-davanila amin’ny faritra Sambirano. Ny asabotsy teo, raha ny vaovao voaray, dia mpanagom-bokatra « Mandateur » sy « Collecteur vanille » miisa 144 no nizarana karatra, tao amin’ny biraon’ny Distrikan’ Ambanja.
L’article Ambanja : Taom-piotazana lavanila, hisokatra androany ny any amin’ny faritra Sambirano a été récupéré chez Midi Madagasikara.
Madio izahay ?
Antomotra ny fety. Mihetsiketsika indray isika mianakavy fa handray vahiny. Samy miedinedina ery mandray andraikitra manadio tanàna. Handalo eto tokoa mantsy ny Filohan’i Rwanda, Paul Kagamé, ka tsy maintsy hovaina endrika ho tsaratsara kokoa sy manintona ny maso ireo toerana rehetra holalovany. Sao mantsy ka ho afa-baràka isika satria ity firenen-dry Kagamé ity no filamatra amin’ny fahadiovana sy filaminan’ny tanàna aty Afrika. “Madio izahay!”, (Ny Rahona Ratsimba Georges) hoy ny tsianjery tany an-tsekoly fahiny. Jereo ny tanànanay fa mba mitovy amin’ny anareo ihany koa. Madio saingy…mety ho ao anatin’ny fotoana fohy ihany. Izao aza moa, efa andro vitsy sisa no tsy hahatongavan’ny Fetim-pirenena, mbola tahaka ny inona ny fako mivangongo ao afovoan’Analakely, ao? Tsy mbola madio ny renivohitr’i Madagasikara. Fofona ampy sy fako miparitaka etsy sy eroa no handraisana ny fety. Dia mbola ho toy inona koa aza izany rehefa vita fety? Malagasy mifety ve moa, tsy hanao izay saim-pantany e! Olana eto amin’ity firenentsika ity ny tsy fahampian’ny fanabeazana ho olom-pirenena. Ary rehefa amin’ny andro fety mihitsy aza no vao mainka mampisavovona ny fako. Tsy mba lanjaina amin’ny kilao fotsiny fa amin’ny taonina mihitsy. Andeha hiverenana kely aloha ilay resaka fandalovan’ny Filohan’ny Rwanda, izay vahiny homem-boninahitra amin’ny fankalazana ny Fetim-pirenena malagasy. Raha tsy misy ve izany aloha io fitsidihana ofisialy io, dia tsy nozaraina loko maimaim-poana ireo trano manamorona ny arabe holalovany? Marina fa tsara ny madio saingy ity izy atao anatin’ny fihatsaram-belatsihy tsotra izao no tena mahavàka. Maninona, ohatra, no tsy natao hatramin’izay, na farafaharatsiny, tamin’ny andron’ny fampielezan-kevitra no nanaovana izany ? Raha ny tokony ho izy aza, raha hanao ihany, dia mila haseho an’i Kagamé avokoa ireo toerana ratsy sy maloto indrindra eto amin’ny firenena. Apetraka aminy ny velirano fa rehefa miverina amin’ny diany manaraka eto Madagasikara indray izy any aoriana any dia ho hitany fa hiova “Tana masoandro” ireo tanàna korondondo eto an-drenivohitra ireo. Izany no tena velirano, fa tsy sanatria faly te hoderaina fotsiny amin’ny hoe “madio izahay”, nefa…hay mihaingo ambony tsikoko! L’article Madio izahay ? est apparu en premier sur AoRaha.
Saron’ny polisy ny telo tamin’ireo dahalo ampolony nikasa hanafika tao Maintirano. Afakomaly ireto malaso ireto no nifanehitra tamin’ny polisy. Fiaraha-miasa teo amin’ny fokonolona no nahafahan’ny polisy nisambotra azy ireo. Mbola hita tany amin’izy ireo ny basy fampiasan-dry zalahy rehefa manao ny asa ratsiny. Fantatra fa avy any Morafenobe ireto dahalo ireto ary nikasa hanao fanafihana tao Maintirano.Nitrangana fahafihan-jiolahy tao Amparihimena, fokontany Tsarafara, kaominina ambanivohitra Ambano, distrikan’Antsirabe II, ny faran’ny herinandro teo. Nanao tifi-danitra ireo jiolahy mialoha ny nidiran’izy ireo tao amin’ilay tokantrano notafihina. Tsy afa-nanohitra ireo niharam-boina fa nijery fotsiny izay nataon’ireto jiolahy ireto. Vokany, lasan’ireo jiolahy ny akoho fakana nofo miisa 30. Tsy nisy kosa ny naratra na namoy ny ainy. Ny zandary avy ao amin’ny borigadin’i Faratsiho no manao ny fanarahan-dia miaraka amin’ny fokonolona. L’article Tselatra a été récupéré chez Newsmada.
Miandry indray ny fanendrena ny tale jeneraly vaovaon’ny Birao mahaleo tena miady amin’ny kolikoly (Bianco) raha noheverina ho nataon’ny Filoham-pirenena Andry Rajoelina tamin’ny filan-kevitry ny minisitra manokana natao teny Iavoloha, omaly. Tsy tafiditra tao anatin’ny lahadinika io fanendrena io. Efa tapitra tamin’ny 24 jona 2019 ny fepotoam-piasan’ny tale jeneralin’ny Bianco teo aloha, Jean Louis Andriamifidy. L’article Fanendrena saro-piterahana est apparu en premier sur AoRaha.
Fitiavam-bolan’ny depiote: tsy maintsy hiakatra ny vidin-jiro
Tsy am-piheverana! Nolanin’ny solombavambahoaka eny Tsimbazaza, ny talata teo, ny nampihenany ny tetibola hanampian’ny fanjakana ny Jirama. Lasa 205 miliara Ar ny fanampiana ny Jirama, raha novinavinain’ny governemanta sy ny minisiteran’ny Vola ho 255 miliara Ar. Nangatahin’ny depiote hanampiana ny vola ho an’ny Vaomiera ifotony ho an’ny fampandrosoana (CLD) ny 50 miliara Ar, ary nampiakariny ho 400 tapitrisa Ar isaky ny distrika, tantanin’ny solombavambahoaka. Izany hoe, azo adika fa nahenan’ny depiote ny tetibolan’ny Jirama, tokony hitsinjovana ny mpanjifa manoloana ny fatiantok’ity orinasam-panjakana ity, fa aleon’izy ireo mampitombo ny vola tantaniny, vokatry ny fitiavan-tena sy fitiavam-bola, mialoha ny fiafaran’ny fotoam-piasany amin’ny taona 2019. Tsy azo ihodivirana Efa tsinjon’ny minisitry ny Angovo sy ny akoranafo ity tranga ity na tsy nolazainy mivantana aza. Nambarany, ny talata maraina teo (nolanina ny tolakandro ny tetibola 2019), fa entina manentsina ny banga amin’ny fatiantoky ny Jirama ny 255 miliara Ar, aloa aminy amin’ny kaompania mamatsy solika sy herinaratra. Koa raha mihena io fanampiana omen’ny fanjakana io, tsy maintsy hozakain’ny mpanjifa any amin’ny fiakaran’ny faktiora ny elanelana. Miala tsikelikely amin’ny fanampiana ny Jirama ny fanjakana, ary tsy handoa vola aminy intsony amin’ny taona 2020, raha ny vinavina. Efa mihamiarina ny toe-bolan’ny Jirama tato anatin’ny roa taona farany, saingy ahina ny hoaviny raha tanteraka izao fitiavan-tenan’ny depiote izao. Soa fa manana ny teny farany ny Fitsarana avon’ny lalàmpanorenana (HCC), afaka mandinika sy manapaka tsara ny tombontsoan’ny vahoaka sy ny fiatrehana ny fidangan’ny vidim-piainana. Singa tena miantraika any amin’ny toe-piainan’ny Malagasy an-tanàn-dehibe ny vidin-jiro, ankoatra ny vidin-tsolika, ny hofan-trano, ny saram-pitaterana, ny vidim-bary, sns. Fanamby miandry izay filoham-pirenena vaovao ho lany eo ireo voatanisa ireo. Randria L’article Fitiavam-bolan’ny depiote: tsy maintsy hiakatra ny vidin-jiro a été récupéré chez Newsmada.
Sary: Fanou sy Tiana R.L’article Songadina an-tsary a été récupéré chez Newsmada.
Namoaka fanambaràna ny avy ao amin’ny minisiteran’ ny Asa vaventy sy ny fotodrafitrasa fa hisy ny fahatapahan’ ny fifamoivoizana amin’ny lalam-pirenena fahenina (RN-6) mampitohy an’Ambondromamy sy Antsiranana eo amin’ny PK 468 ao Ambanja. Noho ny fanamboarana tsy maintsy atao eo amin’ny tetezan’i Sambirano no anton’ity fanapahan-dalana ity. Nanomboka, omaly hatramin’ny alakamisy 6 desambra ho avy izao izany fahatapahan-dalana izany manomboka amin’ny 9 ora maraina hatramin’ny 2 ora tolakandro. Nomarihin’ny tompon’andraikitra avy ao amin’ny minisiteran’ny Asa vaventy sy ny fotodrafitrasa fa tsy misy familian-dalana azo atao ao anatin’io fotoana io. L’article Fahatapahan-dalana est apparu en premier sur AoRaha.